Warshadda Jarista Dijital ah | Soo -saareyaasha Dijital ah ee Shiinaha, Alaab -qeybiyeyaasha
Dhaqaale Baako Jarida - ...
Iskudhufka Qalabka Qalabka - A11 ...
Nidaamka jarista dhijitaalka ah ee B1 wuxuu ku ogaan karaa goynta, goynta badh, duugista, shiididda, feeridda iyo buulinta oo leh xawaare sare iyo saxnaan sare. Miiska xamuulka qaada, B1 wuxuu ku dhammaystiri karaa quudinta maaddada iyo ururinta si dhakhso leh. Aad bay ugu habboon tahay samaynta muunad, wax-soo-gaabin gaaban iyo wax-soo-saar ballaaran oo ku yaal Calaamadaha & Sawirada, Baakadaha, Baabuurta, Warshadaha Gasket-ka.
Aad bay ugu habboon tahay samaynta muunadda, wax-soo-saarka gaaban iyo wax-soo-saarka ballaaran ee warshadaha baakadaha, waxaanan soo jeedinaynaa alaabada miiska guurto ah inay ku habboon yihiin baahidaada.
Taxanaha B4-L waxaa loogu talagalay gaar ahaan warshadaha baakadaha, oo leh qiimo tartan iyo cabbir ku habboon.
B8 waa xalka goynta cusub ee B4-iibintayada ugu fiican. Nidaamka jarista dhijitaalka ah ee B8 wuxuu kaloo ku ogaan karaa goynta, goynta badh, duugista, shiididda, feeridda iyo buulinta oo leh xawaare sare iyo saxnaan sare.
Iyada oo la adeegsanayo stacker (quudiyaha xaashida) iyo nidaamka aruurinta, B8 wuxuu ku dhammaystiri karaa quudinta maaddada iyo ururinta si dhakhso leh. Aad bay ugu habboon tahay sambal-samaynta, wax-soo-saarka gaaban iyo wax-soo-saarka ballaaran ee warshadaha Baakadaha, waxaanan soo jeedinaynaa alaabta miiska guurto ah gaar ahaan.
Khadadka fudud oo ka fudud ma aha oo kaliya inay la qabsadaan bilicsanaanta casriga ah, laakiin sidoo kale waxay ku habboon yihiin isticmaalka dhabta ah ee warshadaha macaamiisheena; isku -darka buluug, caddaan iyo cawl, ka dhig mashiinka mid u muuqda mid deggan oo warshadeysan; oo waxaan ilaalinay barta xoogga leh ee mashiinka oo aan la beddelin, qaab dhismeedka guud ee si fiican loo qaabeeyey, nidaamka aaladda dabacsan, waxqabadka goynta saxda ah, iyo raadinta heer sare ee alaabada Ameida.
Iyada oo istuudiyaha (quudiyaha xaashida) iyo nidaamka aruurinta, B4 wuxuu ku dhammaystiri karaa quudinta maaddada iyo ururinta si dhakhso leh. Aad bay ugu habboon tahay sambal-samaynta, wax-soo-saarka gaaban iyo wax-soo-saarka ballaaran ee warshadaha Baakadaha, waxaanan soo jeedinaynaa alaabta miiska guurto ah gaar ahaan.